Cash Game Allin Checker: Gbakọọ nsogbu ndị ahụ tupu ị na-akpọ allin na egwuregwu klọọkụ ịntanetị
Maraworị mkpa ọ dị gbakọọ ihe puru omume tupu akpọ a mmezi al online egosighị mmetụta?
Lee anyị dị njikere iji nwaa akara aka na a ọhụrụ software maka iji gbakọọ Ikekwe merie a mmezi Gaa Texas Hold'em.
Ugboro ole n’ihu onye ọ bụla na-eme ihe ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị aka elu, ị hụla ụdị nsogbu nke kachasị njọ: Kpọọ ma ọ bụ Fold?
N'ihi Cash Game Allin Checker ị gakwaghị enwe ụdị obi abụọ a!
Ihe omume a na-egosi na poker na ntanetị ga-enyere gị aka ịghọta ma ọ bụrụ na oku ị ga - eme, nke doro anya na ogologo oge, nwere atụmanya dị mma gbasara ego (EV +).
Na-agbakọ nsogbu dị na poker: jiri na tebụl na-acha akwụkwọ ndụ
Otu esi eji ya Cash Game Allin Checker? Dị mfe: banye naanị ubi abụọ ahụ Handmalite Aka kaadị mbido gị ma pịa nhọrọ Adabara / Adabaghị ma kaadị ndị ahụ bụ otu uwe ma ọ bụ na ọ bụghị.
N'ọhịa Ndị mmegide (ndị iro na-arụsi ọrụ ike na tebụl), ị ga - abanye ọnụ ọgụgụ ndị egwuregwu ga - ekwu okwu mgbe ị gachara, gụnyere ndị ọkpụkpọ gara allin.
N'ikpeazụ, n'ọhịa Ọnụ ego, ị ga-etinyerịrị ego nke ịkpọ oku gị.
Na-agụta ihe gbasara nke puru omume: cniile ma ọ bụ n'ogige atụrụ?
Site na ịpị bọtịnụ ahụ Lelee ohere gị, obughi nani ị gha ihu mmeri aka gi (Win%), mana ihe ga - ekpebi ihe ikpeazu gi gha - abu uru egosiri na igbe Ite ga-adị, n'ihi na ọ bụrụ na ego nke ite n'ezie bụ na ọ dịghị ihe ọzọ (ọ dịghị ihe ọzọ) na gosiri site Cash Game Allin Checker, ị nwere ike iji obi ike kpọọ ihe niile onye iro gị, ọbụlagodi na ịnwere kaadị abụọ nke yiri ka ọ dị ntakịrị karịa gị.
N'ihi gịnị? N'ihi na ọ bụrụ na iji ihe ngwanrọ a maka egosiri n'ịntanetị ị ga-ahụ na iji aka dịka 8 na 7 na-akwadoghị megide ndị iro 5 ị ga-emeri 14% nke oge ahụ, ọ bụrụ na ị na-egwu allin ọ ga-efu gị euro 2,5 (ma ọ bụ dollar) na ite ahụ mbụ oku ị na-akpọ bụ opekempe 18 euro, ọ pụtara na ị na-etinye 14% nke ego ya n'ime ite ahụ tupu akpọ gị, yabụ na nke a ga - ewetara gị uru akụ na ụba, ya na nha nha nke ite ahụ atụnyere na gbakọọ 18 euro si software.
Iji nwaa ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ, ị nwere ike iji ngwa ọrụ a wee rụọ ọrụ ego na ntanetị na-egwu egwuregwu poker, iji gaa ma kpọọ (ma ọ bụ mepụta) naanị ahịrị nwere njirimara ndị achọrọ, yana mgbakọ na mwepụ nke inweta uru na ogologo oge (EV +).
The na-amasị mmemme nke ThatsLuck? Miss gaghị agbaghara ohere na-adị ọhụrụ na akwụkwọ na ịdenye aha to Youtube ọwa, A ga-agwa gị mgbe niile na ezigbo oge gbasara akụkọ ngwanrọ niile nke ọnụ ụzọ ahụ.
Nbudata Nbudata	Allincheck.zip - 2 MB